कोरोना संक्रमणबाट अर्घाखाँचीका १ युवकको मृत्यु - News Birat
१५ माघ २०७७
काठमाडौं, १५ जेठ-भारतको गुजरातबाट नेपाल फर्कंदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएका अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान नगरपालिका–९ ढिकुराका ३५ वर्षीया युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतको लखनउ आसपास आइपुग्दा उनको गत १० जेठमा मृत्यु भएको थियो ।
लखनउबाट बस हिँड्दा बाटोमा छाती दुख्ने र बान्ता हुने भएपछि उनको बसमै मृत्यु भएको थियो । भारतबाट आएको र अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि मृत्यु भएका उनको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा स्वाब परीक्षण गरिएकोमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालका डा. कपिल गौतमले जानकारी दिए ।
शवलाई कृष्णनगरबाट गएको एम्बुलेन्सले भारतीय सीमा बजार बढनीबाट नेपाल ल्याएको थियो । शवसँगै आएका २ जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको डा. गौतमले जानकारी दिए । उनीहरूसँगै अर्घाखाँचीका ८० जनाको समूहमा आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
शुक्रबार, १६ जेष्ठ २०७७, ००:२१ May 29, 2020 मा प्रकाशित
इलाममा सवारी दुर्घटना एक जनाको मृत्यु
बेलबारीमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु